Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu babefuna ukwazi isiphetho sabo, ngiphuphe ukuthi siphakamise umgubuzelo imfihlakalo futhi lokubheka isikhathi esizayo. indlela Izintandokazi salokhu steel ukubhula. Ukubhula kukhona inombolo enkulu futhi lelisakramente zisetshenziswa ezintweni ezehlukene futhi magic amathuluzi. Ethandwa kakhulu futhi ziyiqiniso okubhula, ku wax, phezu ngezibuko nezingodo ze emasongweni.
Lokubaluleke kakhulu yisikhathi futhi inhlanhla. Kukholakala ukuthi ukubhula eziyiqiniso kakhulu etholwe ngobusuku Ivan Kupala, ngesikhathi sikaKhisimusi, ngoLwesihlanu 13, futhi ngosuku lwakho lokuzalwa.
Nokho, kuyafaneleka ukuthi isonto akamukeli isigaba okunjalo futhi wazizwa ngesono esikhulu lokubhula.
Enye indlela ethandwa kakhulu futhi eyingqayizivele ukuze uthole izimpendulo zemibuzo yabo ukuqagela ku indandatho yomshado. Kunezinhlobo eziningana, kodwa ngaphambi esinitshela ngazo, ukuphathwa okufanele kwenziwe ukulungiswa lesi senzo.
Ukuqagela Kunconywa kusihlwa. Usuku lweviki futhi kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza kahle. Kuyinto engenakwenzeka baqagela ngoMsombuluko - usuku uyakhohlisa, njengoba usuku lalibe nesiqalo esihle kakhulu kubhekwa ukuba ngoLwesihlanu. Ukuthola ekubhuleni, kubalulekile ukuba akhumule iziphambano, izindandatho chaza izinwele.
Kuyinto efiselekayo ikhandlela kusukela amandla omlilo kusiza kutsha futhi kugxiliswe kwenye indawo.
Iringi akanayo ukuba siqu. amantombazane ongashadile ukuboleka indandatho fortune etshela abangane noma odadewabo. Kungcono ukusebenzisa ubucwebe bushelelezi segolide ngaphandle eqoshwe futhi oqoshiwe.
Ukuqagela phezu ring ukuzibandakanya. Inketho 1.
Ngenxa yalesi ukuqagela uzodinga i ring lwekucocisana, izingcezu indwangu kanye amapuleti ezine ezijulile. Guess udinga abantu ababili. UGadi intombazane egumbini, nomsizi wakhe ubeka iringi kwelinye amapuleti ihlanganisa zonke amapuleti ngendwangu. Khona-ke uGadi ungena ekamelweni, bese ukhetha ipuleti eyodwa. Uma iringi ivuliwe kuwo, khona-ke ungakwazi ukulinda lomshado kulo nyaka. Ukube ukuyichaza okwesibili, uzobe washada esilandelayo. Uma yena eqagela ungcwecwe ngengxube indandatho okwesithathu, uzothola oshadile ngemva kweminyaka emibili. Uma ngemva kwemizamo ezintathu iringi watholakala, eminyakeni ezayo ngeke ngishade uGadi.
Ukuqagela phezu ring ukuzibandakanya. Inketho 2.
Lokhu ukubhula kufanele kwenziwe phakathi kobusuku izinsuku Christmas. Ulungele isinyathelo, wagcwalisa ingxenye ingilazi yamanzi. A ingilazi kufanele kube ngaphandle emaphethelweni bese nge phansi flat. Akumele sinqunyiwe futhi kumelwe baqiniseke ahlanzekile. Wabe angakhulula ingilazi ngaphambi amakhandlela avuthayo sehliselwe indandatho yayo ngezansi. Manje kumelwe sibukisisa amanzi ngokusebenzisa indandatho. Labo ababezama ukuqagela ngendlela, bathi bakwazi ukubona ubuso umyeni wakhe wesikhathi esizayo.
Ukuqagela phezu ring ukuzibandakanya. Inketho 3.
Ethandwa kakhulu lokubhula indandatho nge - ukuqagela ku yini indandatho ene-intambo. Ngu asesebenzisa le ndlela, abesifazane abafuna ukuthola izimpendulo zemibuzo ngandlela-thile exhunywe ne izikhathi noma izinombolo. Lokhu ukubhula Kuyasiza ukwazi ukuthi mingaki iminyaka uzoshada, yena zingaki izingane kuyodingeka noma kanjani izinyanga eziningi kuzokwenzeka noma leso senzakalo.
Uzodinga ingilazi, okungaba yingxenye eyodwa kwezine wagcwala amanzi, intambo, 20cm long abamnyama iringi. Kufanele khumbulani wakhe buza umbuzo, futhi ngokucophelela wehlise iringi ku ingilazi ngaphandle othinta amanzi. I ring kumele sigawule like a pendulum, futhi uthinte izindonga ingilazi, likhipha ikhala. Kuyadingeka ukuba ucabangisise kahle zonke Bump odongeni iringi. Isibalo kuthintwa futhi kuyoba impendulo yombuzo othi sakwaGadi.
Ukubhula ngezinombolo iringi ungomunye enokwethenjelwa kakhulu, kodwa akekho kubo ngeke iqiniso, uma abantu ngeke singabaze kubo. Ngakho-ke, labo abakholelwa ekutheni lesi senzo futhi obusolisayo ukuba lolu hlobo indlela ukwazi ikusasa lakho, musa ukuqagela.
Ikhaya ngcono - Iyini? Izinhlobo, isakhiwo, imizi umsebenzi
Armavir State Pedagogical University: incazelo, ikhethelo, izivivinyo kanye nokubuyekeza